Nhau - Musiyano wemasikisi ekurapa, N95 uye KN95 masiki
Musiyano wemasikisi ekurapa, N95 uye KN95 masks
Munguva pfupi yapfuura, isu tese tiri kutenga masiki. Isu takaunganidza rumwe ruzivo pano
Musiyano uripo pakati pekurapa unodzivirira mask, N95 mask uye KN95 mask
1. Chiremba chekudzivirira maski: zvinoenderana neChina GB 19083-2010 inosungirwa standard, filtration kunyatsoshanda ≥ 95% (yakaedzwa neasina oiri ma particles). Izvo zvinodikanwa kupfuudza iyo yekuita yekupinda yeropa yekupinda bvunzo (kudzivirira muviri wemvura kuputika) uye kusangana nehutachiona hutachiona.
2. N95 mask: NIOSH certification, kusefa kwefirita kweasina mafuta oiri ≥ 95%.
3. KN95 mask: sangana nemutemo unosungirwa weGG 2626, uye kugona kwekupepeta kweasina mafuta zvikamu kana kupfuura zvakaenzana ne95%.
Senge mapizi maviri, aya matatu ari pamusoro masiki ekugona nzira dzekuyedza dzakangofanana. Naizvozvo, chiyero chekuchenesa chinowirirana.
Naizvozvo, isu tinotenga masiki eNIOSH N95 uye GB2626-2006 KN95 akafanana. Kiyi yekupfeka mask ndeyekuvhara nechiso, ndiko kuti, hapana mweya unodonhedza! Ndokumbirawo kuti muverenge mirairo zvakanaka musati mapfeka.
“Maitiro epakati emasikisi emaindasitiri nemasikisi ezvevatengi akafanana. KN95 ye GB2626 yakajairika iri OK, uye KN90 yakakwana pachokwadi. Chete kana vashandi vezvekurapa vaine mvura yemuviri inoputika, uye kana iko kusangana kwezvemamiriro ekunze kwakanyanya, kunofanirwa kuve kwakanyanya. Asi zvinofanirwa kucherechedzwa kuti dzimwe nyeredzi dzakanaka nemasikisi akafanana, asi kunyangwe zviite sei. ”Nyanzvi dziri pamusoro idzi 3M dzakaudza mutori wenhau wezvehupfumi wezana ramakumi maviri nemana.
Kana zviri zvekuwandisa kwekuchinja mamask, ivo vambotaura pamusoro apa vakati kana vakasviba uye vakapwanyika, vanozozvichinja mumazuva matatu kusvika mashanu, kana kana vashandi vezvokurapa vakaenda kunzvimbo yakasvibiswa, vanozochinja.
Muchokwadi, hapana mhedzisiro yakajeka pane yakanyanya kupfeka nguva yemasks eN95 kune dzimwe nyika, kusanganisira ndiani, uye hapana mutemo wakakodzera pamusoro penguva yekushandisa masiki eN95 kuChina. Vamwe vaongorori vakaita tsvakiridzo yakakodzera pamusoro pekudzivirira kwekuchengetedza uye yekupfeka nguva yeN95 yekurapa yekudzivirira mask. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti mushure mekupfeka N95 mask kwemazuva maviri, iko kusefa kwekufefta kuchiri pamusoro pe 95%, uye kuramba kwekufema kuchichinja zvishoma; iyo filtration inoshanda inoderera kusvika ku94.7% mushure mekupfeka N95 yekurapa yekudzivirira maski kwemazuva matatu.
Nekudaro, iwo masiki anofanirwa kutsiviwa nenguva kana mamiriro ezvinhu anotevera:
1. Imhedheni yekufema yakawedzera zvakanyanya;
2. Iyo maski yakanganisika kana kukuvara;
3. Kana iyo maski isingakwanise kukwana kumeso zvakanyatso;
4. Iyo masiki yakasvibiswa (senge mavara eropa kana madonhwe uye zvimwe zvinhu zvekunze);
5. Yakave ichishandiswa mune yega wadhi kana kusangana kwevarwere (nekuti iyo masiki yakasvibiswa);
6. Kana iyo maski iine activated kabhoni, pane hwema mumask.
Uye zvakare, mapoinzi anotevera anofanirwa kutariswa paunenge uchipfeka mamask
1. Geza maoko usati wapfeka chifukidzo, kana kudzivirira kubata mukati memukati mechifukidzo panguva yekupfeka chifukidzo, kuitira kuti udzikise mukana wekusvibiswa kwemask.
2. Kusiyanisa zvemukati nekunze, kumusoro nekudzika kwemask. Rutivi rwerudzi rwechiedza ruri mukati uye rinofanira kunge riri padyo nemuromo nemhino, uye iro rima rakatarisana rinotarisa kunze; kupera kwetambo yesimbi ndiko kumusoro kwemask.
3. Usambofa wakasvina mask nemaoko ako, kusanganisira N95 mask. Iwe unogona chete kupatsanura hutachiona pamusoro pemask. Ukasvina chifukidzo neruoko, hutachiona hunonyorova nechimwaya, uye unogona kutapukirwa nehutachiona.
4. Ita shuwa kuti mask inokwana zvakanaka nechiso. Nzira yakapusa yekuyedza ndeiyi: mushure mekupfeka mask, buritsa zvakaoma, uye mweya haugone kubuda mukati memucheto wemask.
Paunotenga mask, unogona kutanga watarisa iyo yemhando logo yeiyo yekunze package. Pfungwa yekupedzisira yekupfeka chifukidzo yakakosha kwazvo. Haingori chena chete asiwo chena!